Vyacheslav Lobaev - indoda abanamakhono owaklama abadumile eponymous sniper isibhamu. Yena - umhlanganyeli kanye owawina imincintiswano eminingi e Umqeqeshi ephezulu ukucacisa sokudubula. Angenele ukwahlulela imincintiswano eminingi e ngokudubula phakathi abacibishelayo ibutho nama-ejensi ahlukahlukene nokuvikeleka. Oqondayo, sína futhi taciturn. Ungase ucabange ukuthi lusebenza kwezinye izidumbu non-zomnyango.
Eseyinsizwa, wahlanganyela Championships amaningi, kuhlanganise umhlaba wonke. Bona Lobaev nezinkinga ezinkulu: isikhali ikhishelwa mncintiswano, hhayi silungile kakhulu ishaya okuqondisiwe. Vyacheslav, befuna ukuxazulula lezi zinkinga, wanquma ukuklama sniper yakhe isibhamu siqu.
"Tsar Cannon" Lobaeva
Vyacheslav Lobaev wafundela amakhosi amacala izikhali e-US, osaziwayo ezifana Clay Spencer futhi Speedy Gonzales. Wafunda okuningi lezi zifundo. Konke lokhu ulwazi abangu kamuva ihlolwe practice umklami abadumile.
Lapho ngibuyela ekhaya, waqale wasiphakamisa yokubhaliswa ilayisensi womshini izikhali. Ingxenye theory yomsebenzi isivele kwenziwe, kusukela, ngesikhathi esifanayo ukufunda kusuka kuzazi phesheya, azidala iphupho lakhe ephepheni imidwebo.
Emva kokuthola yonke imibhalo eziyisisekelo Lobaev ekugcineni wakwazi ukuvula ibhizinisi lakhe walibiza ngokuthi "Tsar Cannon". Zonke okokusebenza, yebo, uthenge phesheya. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi izingxenye esiyinhloko izikhali kungadla ukuthenga kusuka kubakhiqizi bezinye izizwe, kodwa kwakungeyona ngenxa eshaweni umklami. Wayefuna ukwenza pin ngayinye ngokuzimela, musa uthenge omakhelwane angaphandle. Futhi lo mgomo wasifinyelela ngokugcwele.
Lobaev sniper sokuzingela
Kukholakala ukuthi munition iyona ingxenye esemqoka yalolu sokuzingela, nokuthi izinga layo kuthintwa ukunemba ukushaya ilitshe. UMklami ezidumile owawina Championships amaningi wayengacabangi kanjalo. Cartridges, njengoba enjalo, akusho uyohlala endaweni wokugcina ukunemba ukushaya ilitshe amabanga amade, kodwa isibhamu linendima omkhulu.
abakhiqizi Foreign zinombono ukuthi isikhali is "ngensimbi" ngoba izinhlamvu, ngoba bakholelwa ukuthi asikho isidingo ukukhiqiza isikhali olunembile lapho izinhlamvu akusho ihlangabezana nemithetjhwana ezibekiweko kunesidingo. umklami wethu uye wanquma inkinga: uveza isikhali "nge isitokwe" ngokuya ukunemba, esiza ukwandisa ematfuba ukushaya ilitshe. Impendulo evela abasubathi ababesebenzisa isibhamu sakhe, hit ilitshe nje yibhange.
Ngesisekelo sokuzingela - umamukeli - yakhelwe ngendlela original kakhulu. Mshini yesivalo nge esangweni rotary has ezintathu abutment ngokumelene phambi ingxenye. Khanyisa aluminium ingxubevange isisekelo womshini owamukelayo. Insimbi engagqwali ekhiqizwa faka okuyinto ilungiswe emgqonyeni. Shintsha iziqu ngokunemba - omunye "iqhinga" Lobaeva ngezibhamu. ukubopha nomlomo ogibele emgqonyeni we sokuzingela, futhi ikhasimende ungalungisa inhlamvu indlela.
Standard kuqhuma singly icala, "Tsar Cannon" futhi Ushintshe izikhali futhi wenza umagazini ezinhlanu-shot.
Sniper sokuzingela gauge 408 ivumela ukuba hit ilitshe at ibanga 2500-3000 amamitha (kuye ngokuthi u isa ukulwa). SVL osezingeni 338 uyakwazi ukungena target ukukhula kusuka 1600-2000 amamitha. ukuze ngamunye ikhasimende ukufunwa sokuzingela ichaze imingcele yayo: emgqonyeni ubude, ubukhulu, namandla supply system, nokuningi.
The ningi ngesikhathi sokuzingela Russian
Lobaev sniper sokuzingela iyona olunembile kunazo eRussia futhi kahle kungase kutholakale phesheya. It is lalibuswa isinyathelo ephakeme phakathi kwezinye izikhali umthelela. Ukhicita lobaev sniper sokuzingela edolobheni elincane Tarus e kwamahora ambalwa ukushayela kusuka eMoscow, inkampani "Tsar Cannon", okuyinto kushintshwe ngempumelelo ukukhululwa izikhali ezinjalo. Leli akulona isimo futhi inkampani yangasese, zona ngokwazo - akunangqondo, kodwa-ke uye wanda futhi wajabulela okukhulu impumelelo izimpahla.
Sniper sokuzingela Lobaeva lokho okubizwa ngokuthi isiqephu izimpahla. Wenziwe ukuze ivumelane izidingo ngabanye amakhasimende ayo. Ukunemba kokuthola zikhali 0.2-0.3 MOA. Rifle Lobaeva (namahemuhemu) isetshenziswa ngisho Ukuvikelwa Russian kamengameli.
Ukuhluka udaba sokuzingela
Lobaev sniper sokuzingela (DES) has izinhlobo ezimbili:
sniper isibhamu ukuze amayunithi ekhethekile (DES);
abazingeli sokuzingela Lobaeva (OVL), senzelwe ukusetshenziswa ezisetshenziswa umphakathi (okuzingela futhi target sokudubula).
Ikhono ukusebenzisa "angajwayelekile" cartridges kakhulu kwandisa isithakazelo lobaev sniper isibhamu. Ukunemba hit akuyona encishisiwe: yibhange ngamaphesenti ayikhulu hit uphawu - kuze kufinyelele 2200 m ohlwini izikhali oluqanjwe inkampani Lobaeva ubanzi kakhulu, ngakho kukhona okukhethwa kukho, futhi hunter-lover, kanye namabutho ezikhethekile .. Kodwa, njengoba beye banquma ukuthenga lokhu izikhali okukhethekile, kufanele sikhumbule ukuthi ukuzingela sokuzingela Lobaeva (intengo zazo ifinyelela isigamu sesigidi sama-ruble) - hhayi injabulo ezishibhile.
Kuyinto edabukisayo, kodwa ...
Ngo-2010 Vyacheslav Lobaeva sinqatshiwe ilayisensi ukwenziwa sniper izibhamu. Rumour has it ukuthi leli cala "Izhmash" izandla - esincintisana "Tsar Cannon", linqume ngendlela elula ezifana ukuqeda usongo mncintiswano. Nakuba "Tsar Cannon" futhi engenacala esincintisana zabo eziyinhloko. Ngempela, inkampani ekhiqizwa izibhamu ndlela ezahlukene kanye ukuhlela kabusha (SVL futhi OVL) ukuthi babe ngokuphelele esiyingqayizivele, futhi ngenxa yalokho, eqolo. Le nkampani "Izhmash", akhiqiza izikhali impi. Kodwa kukhona okunjengolwandle okwenzekile.
Vyacheslav Lobaev wakugwema bokwenza amazwana isimo. Ngokushesha le nkampani "Tsar Cannon" wathuthela e-United Arab Emirates, lapho ngempumelelo baqhubeka kukhiqizwe izikhali abadumile. Lobaev Okusizayo waphetha inkontileka nenkampani owaziwa futhi ngokushesha wavula ifemu Tawazun Advanced Defense Systems. It is waziphatha ukukhiqizwa ngezibhamu efanayo, kodwa kuphela ngaphansi kwamagama ehlukene - TADS KS-11. Ngo parallel, inkampani waziphatha ukulungiswa bomlilo, kanye kwenqubekela-phambili kwezesayensi ephezulu ukucacisa imiphumela yesikhathi eside ezayo sokudubula.
Izikhali Lobaeva kuyinto ukusebenza high, okuvumela ukuba ingafika eqophelweni lapho amabanga zicatshangwe, futhi ugxile kakhulu ochwepheshe kunokuba nayizimfundamakhwela.
Ukulwa Imimese - isikhali ozungezwe nomlando omude
Qeqesha ibhayisikili isisindo ukulahleka: kanjani ukukhetha ke?
Simulator kuyinto "Shake Waite" dumbbell (Shake Weight): incazelo, ukubuyekezwa
Damascus neDamaseku imimese steel
Ilungiselela MSI Afterburner: Imiyalelo, izinhlelo kanye nokubuyekeza
Zezindiza Russian. ekuhlaseleni Russian
Ihhotela "Baron Resort Indawo abantu abajwayele" (Sharm El Sheikh): abahambi Izibuyekezo
"Usuku Tatyana sika": nabalingisi lwendaba
Umsunguli we-KFC - Polkovnik Sanders. Biography, umsebenzi kanye nomlando
Nokunye okufana nokolweni Burgers